STP Forex ပွဲစား - Forex Central Clearing Company (FXCC)
သင့် browser HTML5 ဗီဒီယိုကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။
FXCC နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အုပ်စုတစုအားဖြင့် 2010 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင်၎င်းတို့၏ရှည်လျားအတွေ့အကြုံအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းသူတို့ဖောက်သည်အဖြစ်တောင်းဆိုမယ်လို့စံချိန်စံညွှန်းများမြင့်မားပေါ်တွင်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးဖောက်သည်ဗဟိုပြုအဆိုပြုပေးရန်။ ကျနော်တို့လက်လီ Forex ကုန်သွယ်ဈေးကွက်ထဲမှာပုံတွေတွေ့ဆုံးနဲ့ပွင့်လင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုကနေတဆင့်, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းပို့ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' အောင်မြင်မှုကျူးလွန်နေကြသည်။ FXCC ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကသူတို့ခရီးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းကာလအတွင်းတစ်ဦးပြိုင်ဘက်ကင်းကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုခံစားနေတုန်း, သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, သူတို့ကလိုအပ်သမျှသောကိရိယာများနှင့်အတူ၎င်း၏ client များလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
, ယုံကြည်စိတ်ချ Transparent နှင့်တရားမျှတသော
FXCC ရဲ့ ECN / STP မော်ဒယ်ဦးဆောင် multibank ငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူမှတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းများ streaming များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစစ်အမှန်အချိန်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, တက်ကြွကုန်သည်များ, စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများနှင့်ကော်ပိုရိတ် client များပေးပါသည်။
အဆိုပါ ECN / STP မော်ဒယ် FXCC clients များပိုမိုအဆင့်အထိကစားလယ်ပြင်ပေါ်ကုန်သွယ်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။ FXCC ကုန်သည်များအဘို့အထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နှင့်အတူ Forex လောကီသားတို့သည်အကိုပိုပြီးပွင့်လင်းအောင်အတွက်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
အဆိုပါဖျောပွထားသညျ့စီးပှားရေးလုပျငနျးမော်ဒယ်လမျးဖွောငျ့အားလုံး FXCC client ကိုရဲ့အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာစျေးနှုန်း mark-up က, သို့မဟုတ်၎င်း၏ client များအကြားအကျိုးစီးပွားမဆိုပဋိပက္ခများအတွက်အလားအလာဖျက်သိမ်းရေး, အပြိုင်အဆိုင်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ပေးပို့ထားရာထုတ်ယူခြင်း (STP), တဆင့်အသုံးချဖို့အပေါ်အခြေခံသည်။
FXCC ရဲ့ '' အဘယ်သူမျှမဖြေရှင်း Desk '' execution model ကိုအဘယ်သူမျှမကုန်သည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်မျှမ Re-ကိုးကားနှင့်တကွကြွလာ။ client အရောင်းအင်း၏ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့ FXCC ပေးစျေးနှုန်းများအပေါ်လုပ်နေကြသည်။ ကုန်သည်များမှသာအစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင် Bid / အားလုံးအမိန့်အမှန်တကယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ပွင့်လင်းနည်းလမ်းအတွက်ကွပ်မျက်ခံရဖြစ်ကြောင်းသေချာ, စျေးနှုန်းပေါင်းစပ်မေးပါရတဲ့၏စိတ်ချကြသည်ဒါကြောင့်စျေး Aggregators အလိုအလျှောက်ထိုအစိစစ်သည်။
အခါသင်တတ်နိုင်သမျှအဘယ်ကြောင့်နျ Standard များအတွက်ဆွ
ကြုံတွေ့ & တည်ထောင်သည်
အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာမြင့်မားရှိခြင်း, ငါတို့ထွက်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်ကုန်သည်များကိုထောကျပံ့ဖို့ချထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့အတန်းအစားထောက်ခံမှု 24 /5နှင့်အတူပေါင်းစပ်န်ဆောင်မှုတစ်ခု VIP အဆင့်အရင်းအမြစ်များထူးခြားတဲ့ suite ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကုန်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်အောင်မြင်ဖို့ရန်စံပြအခြေစိုက်စခန်းပေးပါသည်။
စစ်မှန်သော STP Execution
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများနှင့်အလားအလာအောင်မြင်မှုအလိုအလျှောက်အနေနဲ့ ECN (အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို) ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, အပြောင်းအလဲနဲ့အမိန့်ပွညျ့စုံမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။
FXCC clients များချက်ချင်းအတည်ပြုချက်နှင့်တကွ, ချက်ချင်း Forex ကုန်သွယ်မှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များ၏အားသာချက်ယူပြီး, ဈေး၌အကောင်းဆုံးက executable စျေးနှုန်းများနိုင်ပါတယ်။ ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်အဘယ်သူမျှမဖောက်စားပွဲပေါ်မှာရှိပါသည်မရှိပြန်လည်ကိုးကားရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့လက်လီ Forex ကုန်သွယ်ဈေးကွက်ထဲမှာပုံတွေတွေ့ဆုံးနဲ့ပွင့်လင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုကနေတဆင့်, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းပို့ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' အောင်မြင်မှုကျူးလွန်နေကြသည်။ ထို့အပြင် ZERO အကောင့်အဖြစ်လူသိများ ECN XL, အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောကုန်သွယ်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများခံစားကြည့်ပါနှင့် 0.0 pips သကဲ့သို့အနိမ့်ရာမှ စတင်. န့်နှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်သုညကော်မရှင်, သုညလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို, သုညအမှတ်အသားတက်နှင့်သုညသိုက်အခကြေးငွေ။
ဗဟို Clear, Ltd
မှတ်ပုံတင်နံပါတ် 14576 နှင့်အတူ။
FX ဗဟို Clear, Ltd
CySEC အားဖြင့် Authorized နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်
တစ်ဆိုက်ပရပ်စ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ (CIF) အဖြစ်
နံပါတ် 121 / 10 လိုင်စင်နှင့်အတူ။
ကုန်သည်ကြီးများ '' #1 ရွေးချယ်မှု
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံ, 24h ဘာသာပေါင်းစုံဖောက်သည်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်း၌သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်
ဗဟို Clear, Ltd မှတ်ပုံတင်ခြင်းနံပါတ် 222 နှင့်အတူဗာနူအာ၏သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ [CAP 14576] အောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ဒါဟာဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူအဖြစ်ဗာနူအာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (VFSC) ကလိုင်စင်နှင့် Securities မှ (လိုင်စင်) အက်ဥပဒေ [CAP 70] အတွက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံအောက်မှာအာမခံအတွက်ဆက်ဆံ၏စီးပွားရေးအပေါ်သယ်ဆောင်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
FX ဗဟို Clear, Ltd မှတ်ပုံတင်ခြင်းနံပါတ် HE 258741 နှင့်အတူဆိုက်ပရပ်စ်ကုမ္ပဏီဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုစျေးကွက်များ 2007 ၏ဥပဒေ (ဥပဒေ 144 (ငါ) / 2007), နှင့် CySEC မှဘာသာရပ်အောက်, ဆိုက်ပရပ်စ် Securities and Exchange Commission (CySEC) ကတစ်ဦးဆိုက်ပရပ်စ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ (CIF) အဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် စည်းကမ်းများ။ FX ဗဟို Clear, Ltd များအတွက် CySEC စည်းမျဉ်းလိုင်စင်နံပါတ် 121 / 10 ဖြစ်ပါတယ်။
client များကိုယ်စားအမိန့်များ execution ။
ပေါနှင့် custodianship နှင့်ထိုကဲ့သို့သောငွေသား / ပေါင်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ် related န်ဆောင်မှုများအပါအဝင် Clients တွေအနေနဲ့၏အကောင့်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ၏အုပ်ချုပ်မှု။